Wondering | Layma's World
Posted on January 24, 2009 by layma
ကျောင်းပြေး မိလေပြီ …။
သူများတွေ စာအံတာကို တိတ်တိတ်ငေးရင်း ဝေးဝေးမှာ လုပ်ချင်တာ လုပ်တတ်ခဲ့ပြီ …။
ကျောင်းကို ဦးတည်ပြေးပြီး စာသင်ခန်းနားရောက်မှ လှည့်ပြေးတတ်တဲ့ ခြေလှမ်းတစ်စုံကို တာဝန်ယူမဲ့သူမရှိပြီ …။
ဒေါင် … ဒင်သံကြားမှ ကျောင်းကို အူယားဖားယား ပြေးတတ်သူအတွက် ခေါင်းလောင်းထိုးမယ့်သူမရှိပြီ …။
ဖတ်သူမရှိတဲ့ စာစီစာကုံးတွေက စာရွက်ပေါ် မရောက်နိုင်ပြီ …။
ဟာမိုနီ လိုက်မယ့်သူမရှိတဲ့ သီချင်းတွေက ဗိုက်ထဲကို ခုန်ချသွားကြပြီ …။
ကျောင်းသွားဖော်တွေ အများကြီးကြားက ကျောင်းပြေးဖော်ကို အလျင်စလို ရှာမိသည် …။
ကျောင်းပြေးတစ်ယောက် ရေကန်ဘေးမှာ ငါးမျှားတံ တစ်ချောင်းနှင့် ထိုင်နေတတ်သည် …။
အတွေးတွေကို ငါးစာအဖြစ် ငါးမျှားတံထိပ်တွင် ချိတ်ဆွဲ ခဲ့သည် …။
ကန်ထဲတွင် ငါးတစ်ကောင်မျှမရှိ … ။
နေစောင်းတော့ ရေစိုနေတဲ့ အတွေးတွေကို နေလှန်းပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့သည် … ။
ဤနည်းဖြင့် ကျောင်းပြေးတစ်ယောက် ကျောင်းပြေးခြင်း၌ ခုံမင်နေသည် …။
ကျောင်းပြေးသည် ကျောင်းပြေးလိုသောကြောင့် ကျောင်းပြေးဖော်ကို အလိုရှိသည် …။
ကျောင်းပြေးဖော်တွေ့ ခဲ့လျှင် အတူရွတ်ဆိုဖို့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ကြိုးစားပမ်းစား အစပျိုးထားသည် …။
“ကျောင်းမတက်ရတာ ပျော်စရာ …
ဟ..ဟာ..ဟာ……” ။ ။
Filed under: Pieces, Wondering |	22 Comments »
လေးမနှင့် နာရီ ( ၂ )
Posted on July 12, 2008 by layma
“ လေး … အတွက် ဘာဘီ နာရီ ၀ယ်ထားတယ် .. ” …။
“ ဘာဘီ နာရီ……. ဟား.. မိုက်တာပေါ့..” ( ဟွန့် .. မူကြို ကျောင်းသူများ မှတ်နေသလားမသိဘူး..)
အစကတော့ ဘာဘီ လက်ပတ်နာရီ ၀ယ်ထားတယ်မှတ်လို့ကလေးတွေ… ပတ်တဲ့နာရီ ၀ယ်တယ်လို့တိတ်တိတ်လေး စိတ်ရှပ်နေခဲ့တာ…။
သူပြန်ရောက်လာတော့… လက်ထဲ ကို ဗူးတစ်ဗူး လာပေးတယ် … သူပြောတဲ့ ဘာဘီ နာရီ ဆိုတာ
မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်အောင် ပြုံးပျော်သွားတဲ့ မျက်နှာနဲ့ဘာဘီ နာရီကို ရင်မှာပိုက်ပြီး စက္ကန့်၃၀ လောက် ခုန်ဆွခုန်ဆွ လုပ်နေလိုက်သေးတယ်..။ 😀
စက္ကန့်၃၀ လွန်လေပြီးသောအခါ မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း “ရစ်” ချင်စိတ်ကလေးက ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ၀င်လာတယ်..။
“.. လေးက စားပွဲတင် နာရီ အဆင့် ရောက်နေပြီလို့ဆိုလို ချင်တာလား.. ” 👿
“ ဟင်.. ဘာဆိုင်လို့ လဲ…”
“ Joke ရှိတယ်လေ … ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေကို ပထမတော့ လက်ပတ်နာရီလေးလို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့သွားလေရာ ခေါ်သတဲ့ … နောက်တော့ စားပွဲတင် နာရီ လို ထားခဲ့သတဲ့… လိုမှ ကြည့်သတဲ့… နောက်ဆုံးတော့ မိန်းမတွေက တိုင်ကပ်နာရီ ကြီး နဲ့တူသွားသတဲ့ …။ လေးက ခုဆိုရင် စားပွဲတင် နာရီ ပေါ့ ဟုတ်လား.. ”
“ ဟား.. ဟား.. လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ … ဗိသုကာမမရယ် .. ဘက်ပေါင်းစုံက လှည့်တွေးတတ်တဲ့ အကျင့်ကြီးကို နေရာတကာ အသုံးမချ စမ်းပါနဲ့ .. ရိုးရိုးလေး တွေးစမ်းပါ … လေးက ဘာဘီကို သဘောကျလို့ဘာဘီ ရုပ်ပါတဲ့ နာရီ ၀ယ်လာတယ် … ဒါပဲ … ရှင်းရှင်းလေး… ရှုပ်အောင်မလုပ်နဲ့ .. ” ( အစကသိရင် တိုင်ကပ်နာရီ ၀ယ်လာပါတယ်)
အင်း သူပြောတာလည်း ဟုတ်သား…။ 🙄
“အိုး … alarm အသံကြီးကလည်း အကျယ်ကြီးပဲ … ဒါသက်သက် ပညာပေးတာ မဟုတ်လား…။”
ပြုံးစိစိ နဲ့တဖက်လှည့်နေတဲ့ မျက်နှာကို အမိအရ ကြည့်ပြီး မျက်စောင်းခဲပြလိုက်တယ် …။
“နှိုးစက်မြည်တာတောင် မနိုးတဲ့ သူတွေ အတွက် အထူး စီမံထားတာတဲ့ …”
“အမယ်… အမယ်… လေးက မနိုးဘူးဆိုတာ ထချင်စိတ်မရှိလို့မနိုးတာ … ထချင်စိတ်ရှိရင် နှိုးစက်တောင် မလိုဘူး.. ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ်နိုးလာတာ…။”
“ဟုတ်လို့ လား အိပ်ပုတ်ရဲ့ … အဆောင်မှာတုန်းကဆို မိက အနွေးထည် ထ… ၀တ်ပေးတာတောင် မသိဘူးဆို …”
“အဲဒါက … အဲဒါက …. မိက ဖြည်းဖြည်းလေး အသာလေး အနွေးထည်ဝတ်ပေးတာဆိုတော့ ဘယ်နိုးပါ့မလဲ…”
“ဟား … ဟား…”
“ရှင်းရှင်းပဲ ပြောစမ်းပါ … နိုးစက်မြည်ရင် ကယောင်ကတမ်းနဲ့ဘယ်နားက ဘာကို ပိတ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတာတွေ … “ကို”ရှိတယ်.. ပိတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး စိတ်ချလက်ချ ဆက်အိပ်နေတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေ ပျောက်သွားအောင်လို့ဒီနာရီ ၀ယ်လာတဲ့ သဘောပေါ့…”
“မဟုတ်ပါဘူး လေးရာ … နာရီ ပုံကို လည်းကြည့်ဦး … ဘာပုံလဲ”
“ ဒီတစ်ချက်ပဲ မှန်အောင်ပြောတယ် … အသည်းပုံလေးတွေ့ လား… လေးကို ချစ်လို့အသည်းပုံပေးတာ… မိနစ်တိုင်း ချစ်နေမယ်… ကို့အသည်းနှလုံးကို ပေးထားတယ်… ကဲ… ဒီသဘော… အဲဒီသဘောနဲ့ဝယ်လာတာ… ပေါက်ပြီလား…။ ”
“ ဟွန့်… အပိုတွေ လာ ရွှီးမနေနဲ့ .. လူကိုများ “အ” တတ မှတ်နေလား… ရွဲ့ပြောနေတာ သိသားပဲ … ”
မဟုတ်မှန်းတော့ သိတယ်… ဒါပေမယ့် ကြိုက်တယ် … ။ ။ 😳
Filed under: Pieces, Wondering |	19 Comments »
Posted on July 4, 2008 by layma
ငါ့ပို့ စ်မှာ ငါ့ မိတ်ဆွေတွေ “ ငါ ” အကြောင်း ထပ်ရေးသွားကြတာ …
( Mi )
“ငါ့ဖို့ ၊ငါ့ဟာ၊ ငါ့အတွက်“
ငါ့ရဲ့ခွေးကို မျက်စိနောက်လာလို့ 
( ကို Boyz)
ငါ့အဆုတ်ထဲ ရှိုက်သွင်းလိုက်တော့မယ် …
ငါ မာလကီးမယားခင်တော့ သောက်လိုက်ဦးမယ်
( ကိုရန်အောင် )
ဒီရပ်ဝန်းကို ငါ ဘယ်လို မျက်နှာလွဲရမှာလဲ …။
ဇူလိုင်လဆန်းက စပြီး စာရေးတာနားမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီး ကမ္ဘာကို ကျိန်စာတိုက်လိုက်တဲ့ ဟိုအမျိုးသမီးကို လေးမက ဒီပို့ စ်နဲ့လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်လိုက်ပါတယ် ။
အရေးတော်ပုံ အောင်ပါစေ ။
Filed under: Wondering |	15 Comments »
မိုးရွာနေသည် ( ၂ )
Posted on May 24, 2008 by layma
မိုးဦးကာလ ရောက်တော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် မိုးရွာသည်… ။
မိုးနှင့်အတူ မုန်တိုင်းလာသည် … ။
လေနှင့်အတူ လှိုင်းလာ၏ …။
လှိုင်းနှင့် အတူ အိမ်များ … လူများ … တိရစ္ဆာန်များ … ၀မ်းစာများ … အဆင်တန်ဆာများ … ပါသွားလေ၏…။
ပါသွားသောအရာများနောက်တွင် ငိုကြွေးမှုများ … ကြေကွဲမှုများ … ပူဆွေးမှုများ … ဆုံးရှုံးမှုများ ကျန်နေခဲ့၏ …။
ကျန်နေခဲ့သောအရာများအား အမှီပြု ၍ ဒေါသနှင့် ကျိန်ဆဲမှုများ လှိုင်းထလာပြန်သည် … ။
လောဘသားအချို့ သည် မေတ္တာရှိဟန်ပြ ၍ ကိုယ်ကျိုးရှာနေကြပြန်သည် … ။
နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်သူတို့သည် ဂရုဏာရှိဟန်ပြ၍ အမြတ်ထုတ်ရန် ကြံစည်ကြပြန်သည်… ။
အဆုံးသတ်တွင် ကလေးများသည် ပျော်ရွှင်မှု ကင်းမဲ့ကြကုန်၏ … ။
အဖြူရောင်နှလုံးသားများသည် ညစ်ထေးလျက် ငိုကြွေးကြကုန်၏… ။
မိန်းမတစ်ယောက်သည် တစ်ခွေ ၅၀၀ ဟူသော ၂ ခွေ တွဲ..၊ ၃ ခွေတွဲများကို စိုက်ကြည့်ရင်း စီဒီချပ်များကို ထမင်းထုပ်များအဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်နေ၏ … ။
ထို့ နောက် မိုးရွာလာသည် … ။
မိုးရာသီ စပြီဖြစ်သောကြောင့် မိုးဆက်ရွာနေသည်… ။
မိုးသည် ဆက်၍ …ဆက်၍ … ရွာနေပေလိမ့်မည်…။ ။
မိုးရွာနေသည် ( ၁ )
Filed under: Seasonal Post, Wondering |	7 Comments »
သူတို့လို ပျော်မိသည် …
Posted on December 29, 2007 by layma
* Source :ကိုပြူး နှင့် မပြုံး (ကာတွန်းဝိဇ္ဇာ အလင်္ကာကျော်စွာ ဦးဘဂျမ်း)
စစ်ကြီးပြီးဆုံး၍ … အဲ … ဟုတ်ပေါင်… အဲ..အဲဒါကြီး ပြီးဆုံး၍ … လေးမ တစ်ယောက် iblogger.org သို့ အရောက်တွင် …. လေးမ blog စလုပ်တုန်းက မိတ်ဆွေဟောင်း တော်တော်များများ လိုက်မလာနိုင်ခဲ့ပါ…။
ခုတော့ ဟောာဒီ..ဒီဇင်ဘာလမှာ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေ အတော်များများ ပြန်လာလည် သွားကြပါတယ်…။
နောက်ဆုံးရောက်လာသူကား လေးမ၏ မိတ်ဆွေကြီး ဂုတ်တို အဲ .. ယောင်လို့ … ဂျယ်ရီ ပင်ဖြစ်ရာ …. ဘယ်အရပ်က ပေါ်လာသည်မသိ … မနေ့က စာကြွေးတွေ တပုံကြီးဖတ် … comment တွေ တပျော်ကြီး ပေးသွားသဖြင့် … လေးမမှာ ၀မ်းသာ၍ မဆုံးတော့…။ ။
လေးမ၏ အရည်မရ အဖတ်မရ … ချောက်တီးချောက်ချက် … စာမျိုးစုံကို …. ပုံမှန် (သို့) တခါတရံ လာရောက် ၀ါးမျို မှတ်ချက်ပေးသွားကြသော
…. မောင်မျိုး၊ ကိုစာကလေး ၊ ကိုသန့်ဇော်မင်း ၊ ကိုမျှားပြာ ၊ ကိုညိမ်းညို ၊ ကိုလွမ်းစေ ၊ ကိုဂျယ်ရီ ၊ ကိုဒီဝိုင်း ၊ ကိုအတာ ၊ ကိုဇီးကွက်၊ ကိုတော်ကီ ၊ ကိုမျက်လုံး ၊ ဘလင့် ၊ ကိုနိုင် ၊ ကိုသုပုန် ၊ကိုပီကေ ၊ ကိုဘုရင့်နောင်၊ ကိုပုဂံသား၊ ကိုကောင်းကင်ကို ၊ ကိုစိုးထက် ၊ ကိုဂျူလိုင်အိပ်မက် ၊ ကိုရန်အောင်၊ ကိုသင့်ကား၊ ကိုတက်စလာ ၊ ဂျေ ၊ မဂျစ်တူး၊၊ မနုစံ ၊ မမြရွက်ဝေ ၊ မချစ်လေပြေ ၊ သိုးမလေး၊ နှင်းဆီနီနီ ၊ ၀င်္ကပါ ၊ သဇင်ဏီ ၊ မသမုဒယ ၊ မအိမ့်ချမ်းမြေ့ ၊ ညို ၊ ခေးရော့စ် ၊ မအိသူ ၊ မိုးချစ်သူ ၊မမယ်လိုဒီမောင်၊ မတူးတူး ၊ မေပျို ၊သဉ္ဇာ ၊ မညလေး ၊ မပန်ဒိုရာ နှင့်
ဆီပုံးတွင် ဆီဖြည့်ပေးသွားကြသော သူငယ်ချင်းအပေါင်းနှင့် လေးမကို ခင်မင်ကြတဲ့ ဘော်ဘော် အပေါင်း တို့သည်
လေးမကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှု ပေးစွမ်းကြသောကြောင့် လေးမ၏ အဖွဲ့သားများ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည် ။
လေးမ၏ အဖွဲ့ သားများ အားလုံး
“နှစ်သစ်ကူး ရွှင်မြူးကြပါစေကြောင်း ၊ ဂေါ်မစွံ လူပျိုကြီးများလည်း ဂေါ် ၍ စွံကြပါစေကြောင်း ၊ show room ထဲမှ မမလှလှလေးများ၊ ညီမလေးများလည်း … စိတ်ချမ်းမြေ့ကြပါစေကြောင်း ”
ခင်မင်တတ်သော လေးမ မှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင် …။ ။
Filed under: Cartoons, Personal, Tag, That's what I wanna say, Wondering |	17 Comments »
Posted on September 24, 2007 by layma
ကနဦးအစက … မိုးသည် … တစ်ပေါက် နှစ်ပေါက် …
ထို့ နောက် … တဖျောက်ဖျောက် …
ထို့ နောက် … ရွာလိုက်သည်မှာ … မစဲတော့ …
ရေမှုန်ရေမွှား … အစအနလေးများမှသည်…
ရေစက်ရေပေါက်ကြီးများ အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်း …
ထီးလှလှလေးများ … မိုးစက်ကြမ်းများကို အံမတုနိုင်တော့ …
မိုးစက်များ၌ ရေပါ၏ …
ရေပါတော့ ရေကြီး၏ …
လမ်းပေါ်က ရေကန်ကြီးထဲတွင် … ပျက်နေသောကားများ …
ရုန်းထွက်ရန်ကြိုးစားနေသော ကားများ …..
ဟိုမှ ဒီသို့မျောပါနေသော … ရာဘာဖိနပ် ၊ သားရေဖိနပ် ၊ ဒေါက်ဖိနပ်များ …
ဆော့ကစားနေသော ကလေးငယ်များ …
သူတို့ အားလုံး မိုးမိနေကြသည် …
ဟိုဘက်နားက ကလေးတစ်အုပ် … ကဗျာရွတ်နေကြသည် …
ဟော … ဟော … နားထောင် ကြည့် လိုက် စမ်း…
“ မိုး…မိုး….ဘာလို့ရွာ …
ဖား … အော်လို့…ရွာ …။
ဖား … ဖား … ဘာလို့အော် …
မြွေ … ကိုက်လို့ … အော် …။
မြွေ … မြွေ … ဘာလို့ ကိုက် …
ငါ့ ၀မ်းပူဆာ မနေသာလို့ … ကိုက် …။ ”
Filed under: Seasonal Post, Wondering |	4 Comments »
Posted on August 11, 2007 by layma
ကျွန်မက ယောက်ျားကို သိပ်ချစ်တာ… အဲဒါကြောင့် စိတ်မချဘူး…. ကျွန်မက အိမ်ထောင်ရေးမှာ ရာထူးတက်မှာ သိပ်ကြောက်တာ…။ ကျွန်မကို ယောက်ျားက ပြောတယ်…. “သံသယတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ မိန်းမ” တဲ့….. “တနေ့ အဲဒီစိတ်နဲ့မင်းရူးလိမ့်မယ်” တဲ့……။
အချိန်တန်လို့သူပြန်မရောက် လာသေးဘူးဆိုရင် သူ့ ဖုန်းကို မရမက လိုက်ဆက်တတ်လို့တခါတရံ ယောက်ျားက ဖုန်းပိတ်ထားတတ်တယ်….. အဲလိုနေ့ မျိုးဆို ရန်ပွဲ….ငိုပွဲပဲ…..။ ခုလဲ ည ၈ နာရီထိုးနေပြီ….. ထမင်းစားစောင့်နေတာ ပြန်မလာသေးဘူး….။ ဖုန်းဆက်မိမှာစိုးလို့လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားပေမယ့် အချိန်တန်တော့ ဒီနံပါတ်တွေကိုပဲ နှိပ်မိသွားပြန်တယ်….. “လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော…….” ဟင်….ဘယ်ကမိန်းမလဲ…. ယောက်ျားဖုန်းကို ဒီမိန်းမက ဘာလို့ ကိုင်ရတာလဲ…. “ဟိတ်… ညည်းဘယ်သူလဲ…” ဒီအသံ….ကြားဖူးပါတယ်….. အော်…ဒါ ဆက်သွယ်ရေးက သွင်းထားတဲ့ အသံပဲ….. ဟူး….ဖုန်းချလိုက်တယ်…..။
အင်…ဒါနဲ့ နေပါဦး….. “ဧရိယာပြင်ပရောက်ရှိနေပါသဖြင့်……”
လို့ ဖြေသွားတယ် …..။ ဧရိယာပြင်ပဆိုတာ ဘယ်လိုနေရာမျိုးပါလိမ့်….. ဘုရား….ဘုရား….။ သူ့ အတွင်းရေး မှူးမလေးဆီက ဖုန်းလာတိုင်း ….ကျွန်မရဲ့ profession ကိုစွန့် ပြီး အတွင်းရေးမှူးသင်တန်းပဲ ပြေးတက်ရတော့ မလိုလို ……. စာရင်းအင်းတွေပဲ ပြေးသင်ရတော့ မလိုလို…..ကျွန်မ ကယောင်ချောက်ချား ဖြစ်ဖြစ် သွားတတ်ပါတယ်…..။ ကျွန်မ သူ့ အတွင်းရေးမှူးလုပ်မယ်လို့အရေးဆိုဖူးပါတယ်….သူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ “ မင်းကတော့ စက်ကတ်ကြေးပဲ လုပ်လို့ ရမယ်….” တဲ့…..။
ကျွန်မကို လူတွေက မကြားတကြားပြောကြတယ်….. “ အဲဒီမိန်းမက သူ့ ယောက်ျား ကို ချစ်လွန်းလို့ရူးနေတာ….. နေရာတကာလိုက်ကြပ်လွန်းလို့ဘယ်နေ့ ထားခဲ့ခံရမလဲ မသိဘူး…. အဲဒီနေ့ ကတော့ အဲဒီမိန်းမ သွက်သွက်ခါ သွားမယ့်နေ့ ပဲ….” တဲ့…..။ ဟုတ်လား…. ကျွန်မ ရူးနေတာလား….။
လေးမ…ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး blog မှာစာတွေရေးနေတယ်…. မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့နောက်လို့ပြောင်လို့ ….. ပျော်လို့ ….ပါးလို့ …..။ အဲဒါကို ကြည့်မရဖြစ်ပြီး မျက်စိစပါးမွှေးစူးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိ နေပါတယ်….။ သူဘယ်သူလဲသိလား…. လေးမ ရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်ကြီးပေါ့….(အချင်းချင်းကပ်ပြီး မနာလိုဖြစ်နေတာလေ )…။ ဒီနေ့ တော့ သူ…. လေးမကို ပေါ်တင်ချဲပါတယ်…..။
“လေးမ….. နင့်ကိုယ်နင် I’m the Queen ဆိုပြီးတော့ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်နေတယ်ပေါ့….. ဘာတွေလျှောက်ရေးမှန်းမသိဘူး….. ပေါကြောင်ကြောင်နဲ့ ….. ကဗျာတွေလဲပါရဲ့…. ရှက်ဖူးလား…. အတိတ်အတိတ်ဆိုပြီး ပြန်ပြန်ရေးနေတာ တရား လက်လွတ်လှချည်လား….. ဟင်….စိတ်ကို present မှာတည့်တည့်ထားရမယ်လို့ဘုန်းဘုန်းဟောထားတယ်လေ….. ငါတော့ နင့်ကိုစိတ်ကုန်တယ်…. ဟိုတနေ့ကလဲ … မိန်းမဆိုတာ သနပ်ခါးပန်းနဲ့တူသတဲ့….. တခါမှ မကြားဖူးဘူး…. မိန်းခလေးတွေကို စပယ်…ခရေ…နှင်းဆီ နဲ့ ပဲ တင်စားလာကြတာ….. နင့်ကျမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း….. ။ အဲလိုသာ ပြောကြကြေးဆိုရင်….. ငါသာ ယောက်ျားလေးဆိုရင် မိန်းမတွေဟာ “ဘိန်းပန်း” နဲ့ တူတယ်လို့ရေးမှာပဲ….. ရေးလေ…. အဲလိုပြန်ရေးစမ်း…. အဲ…ဟုတ်ပေါင်… နင့်ကို စာမရေးအောင် တားနေပါတယ်ဆိုမှ မြှောက်ပေးသလို ဖြစ်သွားပြန်ပြီ…..။ တော်ပြီ……တော်ပြီ…. နင်လုပ်စရာအလုပ်တွေ ပုံနေပြီ….. ဘာမှ လျှောက်ရေးမနေနဲ့ … သိတာ….တတ်တာလဲ ဟုတ်တိပတ်တိ မရှိဘဲနဲ့အာချောင် မနေနဲ့ ……။ ကဲ…. ငါအခု သခွတ်ပင်မှာ နတ်သဘင် ညီလာခံတက်ရဦးမယ်….. ညီလာခံမှာ ဒီပြသနာကို သိကြားမင်းကို တင်ပြရမယ်……။ နင်အိမ်မှာ အိပ်နေနော်….. နင်နိုးနေရင် ငါစိတ်လေးလွန်းလို့ ….။”
တချိန်လုံး ငြိမ်ခံနေခဲ့တဲ့ လေးမ ဒီတခါတော့ အပီပဲဆိုပြီး ပြန်တွယ်လိုက်တယ်…… “ဟွန်း….ကိုယ်စောင့်နတ်ကလဲ…. တလွဲကြီးပြောနေတယ်…. သိကြားပြည်မှာ ကသစ်ပင် ပဲရှိတဲ့ဟာကို….. သခွတ်ပင်က အသူရာ ပြည်မှာ ပေါက်တာကြီးကို…..”
“ ဟဲ့…. နေရာပြောင်းထားတာ…. နေရာပြောင်းထားတာ…. မသိရင်မပြောနဲ့ …. တခွန်းမှကို ၀င်မပြောနဲ့ ….တော်ပြီ….နောက်ကျနေပြီ…. ငြိမ်ငြိမ်နေ….ကြားလား….”
နောက်ပစ်ထားတဲ့ လက်လေးနှစ်ဖက်ကို အသာလေးခါပြီး ဦးညွှတ်လို့အရိုအသေပေးလိုက်ပါတယ်…..ခေါင်းမငုံ့ လို့ မရဘူးလေ….. ကိုယ်စောင့်နတ်လဲ အရူးပဲလို့နှုတ်ခမ်းလှုပ်ရုံ ရေရွတ်လိုက်တာ သူတွေ့ လို့ မဖြစ်ဘူးလေ…. (ပြန်မပြောကြေးနော်)……။
ကဲ….လေးမ နဲ့ကိုယ်စောင့်နတ်….. ဘယ်သူ ရူးသလဲ….. နှစ်ယောက်လုံးပဲ ထင်တယ်နော်…..။ ။
“ ပုထုဇဉ်တိုင်းဟာ တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး ရူးကြတာချည်းပဲ” တဲ့…။
(ဦးကြီးပုထုဇဉ်ကို လေးမ ရန်စတာ မဟုတ်ရပါဘူးရှင်)
P.s.ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရူးနေကြတဲ့ အရူးတွေ အများကြီးရှိတဲ့အနက် ဒီအရူး ၅ မျိုးကို လေးမ စိတ်ကြိုက် စကာတင် ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်…..။
Filed under: Analysis, Wondering | Tagged: Features |	8 Comments »
မျက်နှာမှာသနပ်ခါး ပါးကွက်ကြီးကြီးကွက်ထားတယ်….ရဲရဲနီနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းက တတွတ်တွတ်ရွတ်လို့ … .မကျေနပ်တာတွေလဲပါတယ်…. ကျိန်ဆဲနေတာလဲကြားရတယ်…. သီချင်းတွေလဲ ဆိုနေတယ်….။ စိုက်ကြည့်သွားတဲ့ သူတွေကို မျက်စောင်းထိုးလိုက်တယ်….။
အလိုတော်….ဟိုကောင်မလေးတွေများ…. အကျီအကောင်းကို တမင်အပေါက် ဖောက်ဝတ်တော့ ကြည့်ကောင်းနေကြတယ်….ကျုပ်မှာ ဒီတစ်ထည်တည်းရှိလို့ပြဲစုတ်နေတာကြတော့ နှာခေါင်းရှုံ့သွားကြတယ် ….. အံ့ရော…. အံ့ရော…..။ ဘာလဲ…..ဟား….ဟား…. မနာလို ဖြစ်နေကြလား….ကျုပ်လို စိတ်ရှိတိုင်း ပြောခွင့်မရှိလို့လေ……ကျုပ်ကို အရူးတဲ့….ဟား….ဟား…..အရူးဆိုတာ နာမည်သာဆိုးတာ နင်တို့ လို…………။ ကျုပ်လွယ်အိတ်ထဲမှာ အစုံပါတယ်….ကျူပ်စိတ်နဲ့ 
တွေ့ တာလေးတွေဆို ကောက်ထည့်ထားလိုက်တာဘဲ….. စာရေးဆရာဆိုတဲ့လူကြီးတွေက ကျုပ်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့“အရူးလွယ်အိတ်” ဆိုလားဘာလား….ပြောသံကြားမိသေးတယ်…..။ ကျုပ်က စိတ်ပျော်ရင် ပါးစပ်ဆိုင်းတီးပြီး ကွေးနေအောင် ကလိုက်တာပဲ….. DJ မလိုဘူး …. KTV ဆိုင်သွားဖို့ မလိုဘူး….Club မှာ member ၀င်ဖို့ မလိုဘူး…..။ လောကကြီးမှာ ပိုက်ဆံဆိုတာကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်တာ ကျုပ်ပဲ…..။ ကျုပ်အတွက် ငွေဆိုတာ ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူး…..။ ဟော…. စားသောက်ဆိုင်က ကောင်လေး ကျုပ်ကို ထမင်းကျန် ဟင်းကျန်လေးတွေ လာပေးပြီ….( ဒါတောင် တချို့ ဆိုင်တွေက ၀က်စာပြန်ရောင်းရတာ ပိုက်ဆံရလို့ကျုပ်ကိုမကျွေးနိုင်ဘူးတဲ့….. ကျူပ်ကို မောင်းထုတ်ကြသေးတယ် ) ။ ရော့…ခွေးပိန်မ….စား….မင်းတ၀က်….ကျုပ်တ၀က်…..အညီအမျှဘဲနော်….လာမလုနဲ့ …. ကျုပ်က လူကောင်းတချို့ ထက် စိတ်ကောင်းရှိပါတယ်….အင်း….ဒါကြောင့် ကျုပ်ကို ဦးနှောက်မကောင်းတဲ့အရူးလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်မယ်……။
ဘောလုံးတစ်လုံးကို လူ ၂၀ က၀ိုင်းလုပြီး ၂ ယောက်က အပေါက်က စောင့်နေကြတယ်…. အဲဒါကို အဖေနဲ့အဖေ့သူငယ်ချင်းတွေက TV ကထိုင်ကြည့်ုပြီး အော်ဟစ်နေကြတယ်….. ဟိုကကြားရတာလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ …. အသံစုံ ထွက်အောင် အော်နေကြတယ်…..။ ပြီးတော့ အနိုင်အရှုံးတွေတွက်နေကြတယ်…..။ ပြီးတော့….ပြောသေးတယ်…. “လောင်းထားမှ ကြည့်ရတာ အရသာရှိတာတဲ့…..” “ လောင်းထားလို့ကြည့်ရတာ” ဆိုတဲ့လူလဲပါသေး…။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာ တချက်မှ ၀င်မကန်လိုက်ရဘဲ ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ လူတွေလဲရှိသေးဆိုဘဲ….။ အမေကတော့ “ငါ့ကို လောင်းကြေးမထပ်တာ နင့်အဖေကိုကျေးဇူးတင်” တဲ့….။ ပွဲတွေကလဲ ညတိုင်းလိုလို ရှိတယ်…. ကန်တဲ့သူတွေသာပြောင်းသွားတယ်….. လောင်းတဲ့လူတွေက မပြောင်းသွားဘူး….။ ကြည့်ပါဦးဗျာ…. နှုတ်ခမ်းမှာ သွေးတွေထွက်လို့ …. ကစားသမားတွေ ဒဏ်ရာတွေရကုန်ပြီ…. မနေနိုင်တဲ့ ညီလေးက ၀င်ပြောတယ်…. “ အဖေရယ်….သူရို့ကို ဘောရုံး တစ်ယောက်တစ်လုံးစီပေးလိုက်ပါဂျာ…… သူရို့ လုနေရတာ တနားပါတယ်….” ။ ဟုတ်တယ်…. ကျွန်တော်လဲ သနားတယ်….. ဘောလုံးကစားသမားတွေကိုရော…. ဘောလုံးပွဲကို ကစားနေကြတဲ့ လူတွေကိုရောပေ့ါ…..။
ဂေါက်သီးတလုံးကို တုတ်တချောင်းနဲ့ကျင်းပေါက်ထဲကို မ၀င်ဝင်အောင် ရိုက်သွင်းနေကြတယ်…..။ တုတ်ကလဲ နံပါတ်အမျိုးမျိုးပါလား……ဒီကစားနည်းကြောင့် ဗိသုကာတွေခမျာ တော်တော်ဦးနှောက်စားကြရတယ်….။ ညီနေပြီးသားမြေကြီးကို ကုန်းတွေဖြစ်အောင် လုပ်ရတယ်…. ချိုင့်တွေလုပ်ရတယ်….. ရေကန်တွေတူးပေးရတယ်…. shape အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ သဲကျင်းတွေတူးပေးရတယ်….. သဲကျင်းတောင် ရိုးရိုးနဲ့ ရှယ် (deep) ဆိုပြီး ခွဲပြီး ထည့်ပေးရတယ်….. မြက်စိုက်တဲ့ လူတွေလဲ မသက်သာဘူး…..Green , fair-way , rough ဆိုပြီး သူ့ နေရာနဲ့ သူ ကွဲပြားအောင်စိုက်ပေးရတယ်…..။ လူဆိုတဲ့ လူတွေက လွယ်နေတာကို တော်တော်ခက်အောင် လုပ်တတ်ကြတာပဲ……။ ဂေါက်ရိုက်တဲ့ လူတွေကလဲ ဒီကစားနည်းကို တော်တော်လက်တွေ့ ကြတယ်……။ အိမ်က မိန်းမက တခုခုမှာလိုက်တာကိုသာ မေ့မယ်….။ ဘယ်ကျင်းမှာ ဘယ်သူက ဘယ်နှစ်ပတ် ပတ်လိုက်တာ…… ဘယ်နှစ်ချက် ရိုက်လိုက်တာ….. ဆိုတာတော့ ဘယ်အချိန်ကောက်မေးမေး အလွတ်ရတယ်……။ ရိုက်ရုံဘဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး….. လောင်းကြေးလေးက ပါသေး…..။ ဒီလိုနဲ့ ဘဲ ဂေါက်သီးလုံးတစ် လုံးကို ကျင်းပေါက်ထဲ မ၀င်ဝင်အောင် ကြိုးစားရင်း …. မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်သွားကြတယ်…..။
P.s.အရူး (၄)…နှင့် (၅) ကို ယနေ့ (သို့ ) မနက်ဖြန်ဆက်ပါမည်….။
Filed under: Analysis, Wondering | Tagged: Features |	6 Comments »
Posted on July 30, 2007 by layma
“ တီ…တီ…” “hello ”
“ ငယ်လေးလား…” “ဟုတ်ကဲ့….”
“ ကို….ပါ….။ အသံကိုမှတ်မိလား…” “ ဟင့်အင်း….”
“ တီ…တီ…” “ hello ”
“ ငယ်လေးလား…” “ဟုတ်….”
“ထမင်းစားပြီးပြီလား…” “ ဟုတ်ကဲ့….”
“ ဘာဟင်းနဲ့ စားလဲ….” “ကြက်….”
“ ကြိုက်လို့ လား….” “ ဒီလိုဘာပဲ….”
“ ဘာမှကြိုက်ဘူး…ထမင်းစားဖို့ လိုအပ်လို့စားတာပါ….ကြိုက်လို့ မဟုတ်ဘူး….”
“ ငယ်လေးက ထမင်းမကြိုက်တော့ ဘာကြိုက်လဲ…” “ မုန့် …ကြိုက်တယ်…”
“ ကလေးလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ….”
“ ဟင်…မုန့် ဆိုတာ ကလေးတွေ အတွက်ပဲလား….လူကြီးစားလို့ မရဘူးလား….”
“ ဒါဆို ဘာမုန့် တွေ ကြိုက်လဲ….”
“ မြန်မာမုန့် ….မုန့် စိမ်းပေါင်း…မုန့် ဘိုင်းတောင့်….ထန်းသီးမုန့် …ကရေကရာ….ခေါက်မုန့် ….ရေမုန့် …ကောက်ညှင်းပေါင်း….”
“ ဒါဆို ငယ်လေး စားဖို့လာပို့ မယ်နော်….”
“ ကြိုက်တတ်တာလေးတွေ ပို့ ပေးချင်လို့ ပါ…”
“ ဘယ်လို သီချင်းတွေကြိုက်လဲ…”
“ ထီးဆိုင် ကြိုက်လား…” “ ဟုတ်…”
“ ဒါဆို ၀ယ်ပေးမယ်…” “ မုန့် ဖိုးကျန်သေးတယ်….”
“ ဟင်..ဘာပြောတာလဲ….” “ ကိုယ့်ဖာသာ ၀ယ်မယ်လို့ …”
“ လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ ပါ…” “ ဟင့်အင်း…”
“ ဒါဆို ငယ်လေးကို နားထောင်စေချင်တဲ့ သီချင်းလေးတွေ selection သွင်းပေးမယ်နော်….”
“ အရေးကြီးတဲ့ စကားလေးပြောချင်လို့….. မှာကော်ဖီသွားသောက်ရအောင်…”
“ ဖုန်းထဲက ပြောလို့ မကောင်းဘူး…”
“ ကို….က အလေးအနက်ပြောချင်တာ….ပေါ့သွားလိမ့်မယ်…”
“ ဒါဆိုပြောနဲ့ တော့…..ဆိုင်တော့မလိုက်နိုင်ဘူး….”
“……..ဒါဆို အခုမုန့် လာပို့ မယ်….၁၅ မိနစ်အတွင်းရောက်အောင်လာမယ်….မုန့် ဆင်းယူနော်….”
“ ပြန်လာပြီလား…” “ဟုတ်ကဲ့….”
“ အခု ဘယ်နေရာမှာလဲ….”
“ ရုံးမှာ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးလုပ်မယ်….၁၅ မိနစ်အတွင်း ရောက်အောင်လာပါ….”
“ ဟိုနေရာက အဲဒီရုံးကိုဝင်ပြီး……အဲဒါဝင်ယူခဲ့ပါ…..”
“ တခြားလူတွေ ဆက်သွယ်လို့ မရလို့ …..ဒေါ်ငယ်လေးပဲ ရုံးကို အမြန်လာခဲ့ပါ….”
သူငယ်ချင်း sparrow မှ “ danger of mobile phone….especially for lady ရေးပေးပါ အစ်မ ”
လို့ပြောထားတာကြာပါပြီ….ဘာရေးရမှန်းမသိတာနဲ့မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး…..။ မနေ့ က cbox ကို sparrow လာလည်တော့မှ ရေးဦးမှပဲဆိုပြီး စိတ်ကူးပေါက်သလို ထရေးလိုက်ပါတယ်…..။ Mobile phone ကို နုနယ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေ အသုံးပြုရင် မှတ်ဥာဏ်ချို့ ယွင်းစေပြီး ၊ မိုးရွာနေတဲ့ အချိန်သုံးရင်လဲ မိုးကြိုးပစ်တတ်တယ် လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်….။ “လက်ကိုင်ဖုန်းဘက်ထရီ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် တရုတ်တွင် လူတစ်ဦးသေဆုံး ”လို့လဲဂျာနယ်တစောင်မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်……။ အခြားသော danger များကိုလဲ စိတ်ဝင်စားရင် google search မှာရှာနိုင်ပါတယ်….။
တချို့ တွေ အတွက်တော့ “Love story on mobile ” ဆိုတဲ့ အဖြစ်လေးတွေ ကြုံနိုင်သလို တချို့ လူတွေ အတွက် ဖုန်းဟာ ချည်နှောင်ထားတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ် လို့ “ လေးမ ” က တွေးပြလိုက်တာပါ…..။ sparrow ကျေနပ်နိုင်ပါစေ…။ ။
Filed under: That's what I wanna say, Wondering |	9 Comments »
Posted on July 27, 2007 by layma
လောကကြီးက ပြောင်ချော်ချော်နဲ့ ….
ငါ့ ရည်မှန်းချက်တွေ နင်ပိုင်ဆိုင်လို့ …
ငါမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ 
ဒို့ နှစ်ယောက်တတွဲတွဲ… ဘယ်တုန်းကမှမခွဲခဲ့ကြဘူးနော်….
အခုတော့ ရှင်ကွဲ ကွဲ…..
မန်းမြေက လမ်းတွေပေါ်မှာ ပဲ့ကြွေခဲ့တဲ့ရက်စွဲလေးတွေကို…..
“ငါ” …. ဒိုင်ယာရီတွေ ရေးထားတယ်…..
ငါ ကတော့ ပျော်စရာတွေဘဲ ရေးထားတယ်….
မျက်ရည်ဝေတဲ့ ညတွေ ၊ အခဲမကျေတဲ့ “လ”တွေကို တမင်တကာချန်ထားခဲ့တယ်……
ဝေဒနာဆိုတာ တမ်းတကောင်းတဲ့ အရာမှမဟုတ်ဘဲ…..သူငယ်ချင်းရယ်…..။ ။
ကဗျာလဲမဟုတ်ဘူး….စာလဲမဟုတ်ဘူး…..ဘာမှန်းလဲသိဘူး…..။ လေးမ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြချင်တာလေးတွေပါ….။ ။
Filed under: That's what I wanna say, Wondering |	4 Comments »